DF oo dooneysa inay soo qaado haweenka Soomaalida ah ee ka tirsanaa Daacish ee ku sugaan Xerada Al-Hawl | Caasimada Online
Home Warar DF oo dooneysa inay soo qaado haweenka Soomaalida ah ee ka tirsanaa...
DF oo dooneysa inay soo qaado haweenka Soomaalida ah ee ka tirsanaa Daacish ee ku sugaan Xerada Al-Hawl
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ogolaaday qorshe ah in la isku dayo in dib loo soo celiyo haweenka soomaali- iswiidhishka iyo carruurtooda ee ku sugaan xerada IS ee Magaladda Al-Hawl Gudaha Dalka Syria.
Hadalkan ayaa waxaa sheegay Radio Sweden oo la xiriiraay Danjiraha Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Mudane Cali Saciid Faqi, kaasi oo uu ka warreystay xaladda muwaadininta Soomaliyeed ee labadda jinsiyadood leh iyo mowqifka ay ka qabaan dhankood kan dawlad ahaaned.
Mudane Faqi Ayaa yiri “Run ahaantii Waa Muwadiniin Soomaaliyed oo uu bahan gargar waana waajib na saaran ka dawlad ahaan waa in aan garab istagno muwadiniyiinteena, Inkast haweenka halkaas ku sugaan ay yihiin haween haysta jinsiyado dadalka kale waa in aynu ka war sugnaa Dalalka ay jinsiyadahooda haystan marka hore.”
“Anaga ka xukumadd ahaan waxaan haysana go’aan uu Madaxweynaha Soomaaliya horey u go’aamiyey oo ahaa in haweenka iyo carruurta doonaya in la geeyo Soomaaliya aynu soo qaadno” ayuu Cali Saciid Faqi ayaa u sheegay Idaacada Ekot ee Dalka Sweden.
Dhanka kale, Danjire Fiqi ayaa sheegay in haweenka iyo carruurta ay Soomaaliya soo celineyso aan maxkamad lasoo taagi doonin, maadaama buu yiri aysan Soomaaliya dembi ka gelin kana soo socdaalin.